भेरी अस्पतालभित्र डा.गोविन्द केसीको उपचार सुरु, गेट बाहिर जीवन रक्षाको कामना – Merokhushi
भेरी अस्पतालभित्र डा.गोविन्द केसीको उपचार सुरु, गेट बाहिर जीवन रक्षाको कामना
मेरो खुसी । ५ आश्विन, २०७७ सोमबार २१:२८ मा प्रकाशित
भेरी अस्पताल नेपालगन्जको क्याबिनमा डा. केसी
नेपालगन्ज : डा. गोविन्द केसीको भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा उपचार सुरु भएको छ । अनसनको सात दिनसम्म जुम्लामा रहँदा औषधि उपचारसमेत गर्न नमानेका डा.केसी ८औं दिनमा पहिलो पटक नेपालगन्जमा उपचार गर्न तयार भएका हुन् ।
भेरीमा आउने बित्तिकै रगत, पिसाब जाँच गरे र इसीजी गरिएको भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर थापाले जानकारी दिए । केसीसँगै नेपालगन्ज आएका कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका डा. प्रविण गिरीले मेरो खुसीसँग भने, ‘जुम्लामा हुँदा कुनै उपचार गर्न मान्नु भएको थिएन । नेपालगन्जमा पुगेपछि स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सुरु भएको छ । स्लाइन पनि लिन मान्नु भयो । अब स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ ।’
भेरी अस्पताल बाहिर डा.केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै बास नेपालगन्जले आयोजना गरेको द्वीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम
भेरीमा उपचार गराइरहेका डा.केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै बाँके नागरिक समाजले सोमबार साँझ अस्पताल बाहिर द्वीप प्रज्ज्वलन गरेको थियो । कार्यक्रममा डा.विनोद कर्ण, गैसस महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नमस्कार शाह, अधिवक्ता प्रल्हादबहादुर कार्कीलगायत नागरिक अगुवाले केसीको जीवन रक्षाका लागि ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । डा.केसीलाई मंगलबार बिहान ११ः १५ बजेको बुद्ध एयरको विमानबाट काठमाडौं लैजाने तयारी भएको छ । यसअघि बास नेपालगन्जले वीपी चोकमा डा.केसीको जीवन रक्षा र कुलमान घिसिङको पुर्ननियुक्तिको माग गर्दै सुर्खेत रोडको वीपी चोकमा ऐक्यबद्धता कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।